WallaMe - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » WallaMe - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality
WallaMe - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality APK ကို
တိုးပွားအဖြစ်မှန်ကို အသုံးပြု. တကကမ်ဘာပျေါတှငျမက်ဆေ့ခ်ျ Hide ။
သာသင်လိုချင်သောသေူမြင်စေနိုငျသောမြို့ရိုးပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အရပ်ဌာန၌တစ်နေရာရာမှာ, ချန်ထားပါ။ ဒါဟာအများပြည်သူသောနေရာများအတွက်ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများဖုံးကွယ်ထားမယ့်ရယ်စရာလမ်းပါပဲ။
သငျသညျအနီးရှိထရံပုံကိုယူရုပ်ပုံများသို့မဟုတ် freehand ပုံကြမ်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းမျှဝေပါ။
သူတို့သင်ကဖန်တီးရှိရာတည်နေရာတွင်ရှိသည့်အခါသင့်ရဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မြို့ရိုးအထို့နောက်သင်၏မိတ်ဆွေများကရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာအလိုက်ဖြတ်သန်းသင့်ရဲ့တိုးပွားအဖြစ်မှန်အမှတ်တရကြည့်ရှုရန် WallaMe ထူးခြားသောကြည့်ရှုသူကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်အောင်လည်းသင်, သင့်သောမြို့ရိုးအများပြည်သူစေနိုင်သည်။
WallaMe လွယ်ကူသောသင့်ကိုယ်ပိုင် virtual reality ကိုမှန်ကန်စေသည် - လှပသောဟာဖယောင်းစက္ကူ, freehand ပုံဆွဲကိရိယာများ, geolocation နဲ့ပုံရိပ်ခွဲဝေမှု features တွေနှင့်အတူဖန်တီးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ WallaMe app ကိုအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း created ခံရအများပြည်သူနံရံများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ image ကိုစီးခံစားပါ။
- Drawing နှင့်ပန်းချီ tools များ
- မျှဝေခြင်း features တွေ
- Image ကို streaming များ
သင်တို့သည်လည်းလှပသောဒစ်ဂျစ်တယ်ရေးဆွဲ compose ဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံနဲ့စတစ်ကာများထည့်နိုင်သည်။
နဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ် In-app ကိုဝယ်ယူမှုမရှိပါ။ အားလုံး features တွေအခမဲ့ရရှိနိုင်ကြသည်။
ကျနော်တို့သင်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်! သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသို့မဟုတ်အများပြည်သူနှင့်အတူ - - သင့်ခွဲဝေမှု settings ကိုအာရုံစိုက်ဖို့သတိရ ကျေးဇူးပြု. အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျနောင်တရစေခြင်းငှါဘာမှမမျှဝေချင်ကြဘူး!
WallaMe - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality
21.06 ကို MB